Things चीजहरू तपाईलाई iCloud फोटो पुस्तकालय को बारे मा जान्नु पर्छ आईफोन समाचार
Things चीजहरू तपाईलाई iCloud फोटो पुस्तकालय को बारे मा जान्नु पर्छ
क्रिस्टिना टोरेस प्लेसहोल्डर छवि | | iCloud
पक्कै पनि हाम्रा धेरै पाठकहरू पहिले नै आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी द्वारा प्रस्तुत सम्भावनाहरूको फाइदा लिइरहेका छन्। वास्तवमा, वास्तवमा आईफोनमा हामीले तपाईसँग यसका बारेमा धेरै अवसरहरू बोकेका छौं। जहाँसम्म, मलाई लाग्छ कि धेरैलाई अझै यो राम्रो तरीकाले थाहा छैन कि यसले कसरी काम गर्दछ, र कसरी त्यसबाट सक्दो फाइदा लिन सक्छ। त्यसैले आज हामी तपाईंसँग यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं, र हामी यो आधारमा गर्छौं कि तपाईंलाई कार्यक्षमता थाहा छैन। जे होस् यदि तपाईंले पहिले नै यो प्रयोग गरिसक्नु भएको छ भने, हुनसक्छ हामी सबै चीजहरू जुन हामी तपाईंलाई तल दिन्छन ICloud फोटो लाइब्रेरी तपाईलाई रुचि।
परिभाषाको साथ सुरू गरेर, म त्यो आशा गर्छु ICloud फोटो लाइब्रेरी एक आईओएस feature सुविधा हो जुन एक पटक सक्रिय भएपछि तपाईंको सबै छविहरू र एप्पल उपकरणहरूमा भण्डारण गरिएका भिडियो फाइलहरूको क्लाउड ब्याकअप सिर्जना गर्दछ। ती फाइलहरू कुनै पनि अन्य उपकरणबाट पहुँचयोग्य हुन्छन्, तपाईले आफुलाई आफ्नो प्रमाणहरूसँग पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, तपाईं तिनीहरूलाई खाली स्थान बचत गर्न उपकरणमा मेटाउन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, र यस अवस्थामा प्रतिलिपिहरू सबै समयमा स्वत: बनाइन्छ, विगत days० दिनहरूमा मात्र सिnch्क्रोनाइज हुने अतीतको अभावलाई हटाएर। राम्रो लाग्यो? ठीक छ, हामी तपाईंलाई तल भन्छौं कि सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरीका बारे तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा
¿मसँग यो कार्य स्वचालित रूपमा किन छैन? कम से कम अहिलेको लागि, आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी एक बिटा सुविधा हो, त्यसैले म्यानुअल एक्टिभेसन आवश्यक छ र कम उन्नत प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि सिफारिस गरिएको छैन जुन प्रारम्भिक संस्करणहरूबाट क्लासिक बगहरू सम्हाल्न समस्या हुन सक्छ।
¿म यसलाई कसरी सक्रिय पार्छु भन्ने जानेर कि यो अझै बेटा हो?? यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईं यसलाई बेटा भएता पनि प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो टर्मिनलमा यसलाई सक्रिय गर्नका लागि अनुसरण गर्नुपर्ने मार्गहरू सेटि Settingsहरू हुन्। > आईक्लाउड> फोटो र क्यामेरा। त्यो ट्याब भित्र तपाईले एउटा प्रकार्य देख्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई सक्रिय वा निस्क्रिय गर्न अनुमति दिँदछ।
¿यदि मैले iCloud फोटो लाइब्रेरी खोल्छु भने कसरी म मेरा सबै फाईलहरू देख्न सक्दछु? एक पटक समारोह सक्रिय भएपछि, तपाईंको सबै मल्टिमेडिया फाइलहरू तपाईंको iOS उपकरणमा सबै फोटो एल्बममा हुनेछन्। यस समयमा कार्यक्षमताको लागि कुनै नेटिभ अनुप्रयोग छैन, यद्यपि यसले आफ्नो बीटा चरण छोड्ने बित्तिकै आइपुग्नेछ।
¿म कसरी आफ्नो iOS उपकरणमा ठाउँ बचत गर्न सक्दछौं? क्लाउडमा तपाईंको फाईलहरूको बचतको फाइदा लिन र यसैले तपाईंको उपकरणमा केहि मेगाबाइटहरू कमाउन तपाईंले यी मार्गहरू पालना गर्नु पर्छ: सेटिंग्स> आईक्लाउड> फोटोहरू। त्यो ट्याब भित्र, अप्टिमाइज भण्डारण विकल्प चयन गर्नुहोस्।
¿म म्यानुअल्ली फोटो iCloud फोटो लाइब्रेरी मा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ? यद्यपि प्रक्रिया स्वचालित रूपमा गरिन्छ, यदि कुनै कारणका लागि तपाईं मैन्युअल रूपमा छवि अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ। तपाईं भर्खर iCloud.com मा जानु पर्छ र कुनै पनि उपकरणबाट तपाईंले चाहानु भएको फाइल अपलोड गर्नुपर्दछ। त्यहाँ तपाईं ट्याब देख्नुहुनेछ जुन तपाईं छविहरू तुरुन्तै ड्र्याग र ड्रप गरेर लोड गर्न सक्नुहुनेछ।
¿कुल आई-क्लाउड खातामा आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी भण्डारण ठाउँ गणना गर्नुहोस्? हो, तपाईंसँग भण्डारण ठाउँ सबै सम्बन्धित उत्पादनहरूको लागि कुल हुनेछ र त्यसैले, तपाईंले यी फाइलहरूको साथ प्रयोग गर्नुहुने बाँकीको लागि तपाईंलाई घटाउनेछ।
¿के हुन्छ यदि मैले मेरो उपकरणमा छवि सम्पादन गरें भने? यस तस्विर आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरीमा स्वत: बनाइएको परिमार्जन सहित देखा पर्नेछ। मूल बेपत्ता हुनबाट रोक्नको लागि र एक प्रतिलिपि बचत भएकोमा, तपाईंले आईफोन / आईप्याड स्पेस अप्टिमाइजेसन विकल्पहरूको पहुँच गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, उपकरणमा एक सधैं बचत हुनेछ। ती जुन तपाईंले यसलाई मेटाउनुहुन्छ तिनीहरू पनि क्लाउड खाताबाट हराउनेछ, यद्यपि तपाईंसँग recover० दिन अवधि हुन्छ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई पुन: प्राप्त गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » Things चीजहरू तपाईलाई iCloud फोटो पुस्तकालय को बारे मा जान्नु पर्छ
x समाधान भन्यो
क्रिस्टिना सबै धेरै राम्रो छ तर मलाई लाग्छ कि नि: शुल्क GB जीबीको साथ यो दुई सेकेन्डमा भरिन्छ र म जस्तो अरू जो प्रत्येक दिन फोटो खिच्ने समस्या हुन्।
Xsolutions लाई जवाफ दिनुहोस्
ठ्याक्कै। आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरीको स्पष्ट समस्या बिन्दु is हो। प्रायः व्यक्तिहरूसँग G जीबीको आईसीक्लोडले स्ट्यान्डर्डको रूपमा पाएको बढी हुन्छ, तर यदि तपाईंले ती G जीबीको फोटोहरू आफैंले लिनु भएको फोटोमा साझा गर्नुपर्‍यो भने, तिनीहरू चाँडै भाग्नेछन्। मलाई कुनै आश्चर्य छैन यदि एप्पलले चाँडै स्ट्रिमि photos तस्बिरहरू निस्क्रिय गर्यो र हामी सबैलाई आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी प्रयोग गर्न बाध्य तुल्यायो यदि हामी हाम्रो एप्पल उपकरणहरू बीचमा लिने फोटोहरू साझेदारी गर्न चाहन्छौं भने। आउनुहोस्, यो हामीलाई अझ रगत बहाउनु हो। वास्तवमा, जब फिल्म गायब भयो (र यो जनताको ठूलो विरोध पछि फिर्ता आएको थियो), तिनीहरू आउँदै थिए, मैले यसलाई उल्लेख गरेको छु र म भन्छु कि मलाई लाग्दैन कि यसले हामीलाई एप्पललाई मासिक शुल्क तिर्न धेरै समय लाग्नेछ। हाम्रो उपकरणहरू बीच हाम्रा फोटोहरू साझेदारी गर्न सक्षम, र छैन भने।
अर्को दिन मैले समस्या उल्लेख गरें कि आईफोन s एसमा २ जीबी र्याम समावेश छ भन्ने तथ्यले हामीलाई निम्त्याउन सक्छ किनकि यसले विकासकर्ताहरूलाई अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सुरु गर्दछ (विशेष गरी खेलहरू), जुन केवल उपकरणमा रमको मात्रा भएमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीहरू, हामीहरू जसले भर्खर हाम्रो नयाँ आईफोन on मा भाग्य खर्च गरेका छौं spent / months महिनामा आफूलाई टर्मिनलमा फेला पार्न सक्दछौं जुनमा धेरै अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न सकिँदैन र आईप्याडaएप्पलको लुकेको मुद्दाको साथ यो भयो। धिक्कार्दैन। ठिक छ, यो आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरीको साथ, हामीलाई पनि त्यस्तै हुन सक्छ, तपाईंले भुक्तानी गर्नुहुन्न? तपाईं साझा र बाहिर छैन।
Aarancon लाई जवाफ दिनुहोस्
आईप्याड of को लुकेको विषयवस्तु के हो, म किन दोस्रो सेकेन्ड किनिरहेको छु?
यो थोरै थियो ... आईप्याड thing कुरा…
मसँग यो थियो र यसलाई छुटकारा पाउन मलाई धेरै खर्च भयो।
एप्पल वास्तव मा हामी संग यो टेकेको छ।
Elmike11 लाई जवाफ दिनुहोस्
जानकारी धेरै राम्रो छ। मैले भर्खर आईफोन bought खरिद गरें र एन्ड्रोइडबाट आईओएसमा ट्रान्जिसन मैले कल्पना गरेको भन्दा बढी खर्च गर्यो। म विश्वास गर्दछु कि सबै कुरा राम्रो र सरल हुनेछ, र यो एकदम विपरित हो। केहि चीज जुन मलाई फोटो लाइब्रेरीको साथ स्पष्ट छैन: यदि मैले मेरो उपकरणमा फोटो मेटाउनेछु भने, के यो iCloud फोटोहरूमा पनि मेटाइनेछ? के त्यहाँ उपकरणबाट मेटाउने र क्लाउडमा भण्डारण गर्ने कुनै अवसर छैन? धेरै चोटि म फोटो राख्न चाहन्छु, तर यो उपकरणमा हुँदैन।
मलाई थाहा छ म त्यो गर्न सक्दछु गुगल (ग्लगल +) वा ड्रपबक्स (काररोसेल) सेवाहरू प्रयोग गरेर तर म आशा गर्दैछु कि यो सक्कली एप्पल अनुप्रयोगको साथ गर्न सक्नुहुनेछ।
एमेड्यूस्यूलाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस, MX भन्यो
हैन, तपाईको आईफोनमा यसलाई मेटाउने र आईक्लाउडमा राख्ने कुनै तरिका छैन, यदि तपाइँ यसलाई एकमा मेटाउनुहुन्छ भने, तपाइँ सबैमा मेटाउनुहुन्छ।
के गर्न सकिन्छ मेटाईएको फोटो पुन: प्राप्ति गर्नका लागि हो (उनीहरूले यसलाई पहिले नै व्याख्या गरिसकेका छन्) तर के तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो, होईन।
कार्लोस, MX लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईं व्हाट्सएप प्लस प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यसोभए व्हाट्सएपले तपाईंलाई ब्लक गर्न सक्दछ
ओपननोटिफायर (सिडिया) को साथ स्थिति पट्टिमा सूचनाहरू थप्नुहोस्